Hibiscus | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ntak emi ẹkotde Hibiscus ifuru ọnwụ
Ndị China ma ọ bụ Hibiscus bụ ụlọ a maara nke ọma na-ewu ewu, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ dị ogologo oge a na-ekwu na ihe dị iche iche nke ihe omimi. Ọtụtụ ihe ịrịba ama na nkwenkwe ụgha na-ejikọta ya na hibiscus, ma ọ nwekwara uru bara uru. Ị ma? Ulo hibiscus na-acha uhie uhie di n'osisi agha nke Malaysia, na isi obodo ya, ohia mara mma nke Hibiscus, nke ihe kariri puku osisi abuo na eto.
Otu esi elekọta ụlọ hibiscus ime ụlọ
Hibiscus bụ onye nnọchiteanya nke ezinụlọ Malvaceae, nke mara mma, ndị mara mma, ndị okooko osisi ndị mara mma na ndị dị nro, ndị e dere na nsọtụ, emerald leaves. Kesaa na gburugburu ebe okpomọkụ. N'ihi ịma mma ya na enweghị atụ, ọ na-emekarị ka ọ bụrụ ebe a na-etinyerịta ụlọ, a na-eribisị Hibiscus, eyi dị ka ihe mma na ọbụna iji mee ka eserese.
Nhọrọ nke osisi kacha mma maka nwa gị
Ịzụta ụlọ maka nwatakịrị, nne na nna ọ bụla na-anwa ịhọrọ ihe ndị bara uru ma dị mma. Nke a na-emetụtakwa okooko osisi n'ime ụlọ akwụkwọ, n'ihi na ruo ogologo oge, ha ga-abụ ndị agbata obi nke nwa gị. Anyị ga-ekwu banyere otu esi eme nhọrọ ziri ezi ma ghara imehie ihe n'isiokwu a. Ị ma? Nwa ahụ ga-enwe mmasị ọ bụghị naanị na osisi n'onwe ya, kamakwa n'ime ite nke ọ ga-eto.
Ezigbo ụlọ osisi dị mkpa maka ndị mmadụ ịmepụta ụlọ aesthetics na-adịghị arọ. N'adịghị efunahụ àgwà ndị kachasị mma na nlekọta ntakịrị, ọmarịcha okooko osisi ime ụlọ na-eme ka o kwe omume mee ka ndị ọzọ dị jụụ na enweghị onwe ha. Asụsụ Sansevieria Teschin, ọgbọ Afrika, ọkpụkpụ pike - nke a na-akpọ sansevieriya.
Njirimara ọgwụ nke Hibiscus
Gini mere ị gaghị enwe iko tii? Ma oge na-abịa mgbe nwa na-acha akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ tii, na ụdị dịgasị iche iche adịghị echekwa. Ọzọ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii nwere caffeine karịa kọfị, na nnukwu ọnụọgụ nwere ike ọbụna na-emerụ ahụ. Mgbe ahụ bia nyere aka ifuru dị ka hibiscus. Hibiscus nwere uto na-adọrọ adọrọ, àgwà dị mma, na ịghara ịkọwa uru bara uru nke Hibiscus.
Ịhọrọ nke kacha mma okooko osisi inye
Nhazi nke ọma na iche iche nke osisi dị iche iche na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkpụzi ogige ubi. Osisi osisi a na-ahọrọ nke ọma maka ogige ga-eme ihe na-amasị anya na icho mma ya site na mmiri ruo mbubreyo mgbụsị akwụkwọ. Site n'enyemaka nke osisi, ị nwere ike ịmegharị ogige ubi ahụ, kewaa ókèala ahụ ma gbakwunye ya.